अब भारतीय फिल्म नेपाली हलमा नचल्ने (भिडियो सहित) - Ekata News
एकता न्यूज / कार्तिक २५, २०७६ - सोमवार
काठमाडौ । भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेपछि यस विरुद्ध नेपालमा विरोध चर्किरहेको छ । यसै क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता स्वागत नेपालले पनि आक्रोस पोखेका छन् । सोमबार संवाद चौतारीमा भएको एक कार्यम्रममा बोल्दै अब उनले अब भारतलाई शत्रु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।
‘सिमाना जोडिएका सबै छिमेकी हुँदैनन् । अब नेपाल सरकारले भारतलाई छिमेकी राष्ट्र हैन सदियार सत्रु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ ।’ उनले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार छिमेकी राष्ट्र घोषणा गर्ने केही कार्यविधिहरु छन् । तिनै कार्यविधिअनुसार भारतलाई शत्रु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ । अब भारत छिमेकी हैन शत्रु राष्ट्र हो ।’
कुनै भारतिय च्यानलले नेपालि कलाकारका गीत तथा फिल्महरुको चर्चा गर्ने नगरेको उनी बताउँछन् । ‘तर आज देश यो अवस्थामा आइपुग्दा नेपाली मिडियाहरुले भारतीय सिनेमा तथा गीतहरुको चर्चा गरिरहेका छन् । त्यस्ता कार्यक्रम प्रस्तोतालाई सडकमा ल्याएर मकै पोलेजस्तो पोल्न मन लाग्छ । यो आफ्नै मातृभुमी माथिको अन्याय हो’, उनले आक्रोस पोखे ।
यसै प्रसङ्गमा उनी प्रश्न गर्छन्, ‘नेपाली कलाकारको कला भारतीय मिडियामा प्रस्तुत हुँदैन भने हामीले किन उनीहरुका गीत बजाउने ? किन उनीहरुका फिल्म हाम्रा हल हलमा लगाउने ? नेपाली टेलिभिजन तथा रेडियोमा भारतीय फिल्मको समिक्षा र बिज्ञापन किन ? भारतको कुनकुन हलमा नेपाली चलचित्रहरु चल्छन् ?’
यसैले नेपाली हलमा भारतीय चलचित्र चलाउनु वा नेपाली मिडियामा भारतीय गीत तथा फिल्महरुको चर्चा गर्नु भनेको नेपाली ले नै विदेशी सँग मिलेर मातृभुमीसँग गरेको बलात्कार रहेको अधिवक्ता नेपालको भनाई छ । यस्ता संचारमाध्यमहरु देश विरोधी भएको उनको आरोप छ ।
‘अहिले हलमा लागेका जतीपनि चलचित्र छन्, तत्कालै यीनको रिल उतारियोस् , यी चलचित्र बन्द हुन् र नेपाली चलचित्र सुरु हुन्’, उनले भने ।
थप जानकारीको लागी तलको भिडियो हेर्नुहोस्